ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး Link များ The Best Policy of Myanmar Links
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး Link များ The Best Policy of Myanmar Links
တပ်မဟာ (၅) အောင်ပွဲသတင်း
တပ်မတော်နေ့ ညစာစာပွဲ လောက်ကောင်တွေ ၀င်နွဲနေတယ်
8888 people power စာစောင် ဧပြီ၂၀၀၉
မျှော်လင့်ချက် က မှုန်တရေးရေး..
တော်ဝင်နန်းတည်းခိုခန်း က ဗုံးကွဲမှုဓါတ်ပုံများ
Bomb explosion in Yangon inn assessed to have kill...
မယက ဘောလုံးပွဲအတွက် ရွာသားများ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးရ...
စင်ကာပူမှာ မြန်မာ လက်ဖက်များ ပိတ်ပြီ
လူမ၀င်အောင်ဘဲ ကာတာပါ ခင်ဂျ
အလွဲသုံးစားမှု ပုဒ်မ မြန်မာပြည်မှာ အစရှာမရဖူး
လူ့ ဘ၀နှင့် ဒဿနအမြင်များ(၄၈)
နူပါတယ်ဆိုမှ သူခိုးက လာထောင်းနေပြန်ပြီ။
ရွေကို မလို ။ ယူရေနီယမ်ကို လိုသည်။
လူသတ်၊ ဓားပြတိုက်၊ စိန်ရွှေငွေ လုယက်နေတဲ့ စစ်ခေါင်း...
ယဇန လ္ဘက်မှာ ဆိုးဆေးပါသည်ဟုဆိုပြီး စင်္ကာပူ အစိုးရတား...
မြန်မာ နယ်စပ် သံဆူးကြိုးကာမှု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဖြေရှင်...
ရေပေါ်ဆီ လူတန်းစားတွေ..နဲ့ ကျူပ်တို့ မြန်မာပြည်..
လာပါ အတူသွားစို့ 
လမင်းတရာ ( ကြည်အောင်)
စစ်ငနွားတွေက မြန်မာပြည်ကို တိုင်းတစ်ပါးသား လက်ထဲရေ...
မြန်မာ ဘလော့ဂါ တစ်ဦးပြုစုသော "မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်" အဘိ...
UN Relieve report on Burma (MM) FYI
စာရေးဆရာ ကျော်ဝင်း စာဖတ် သူများသို့ ပြန်ကြားခြင်း
(၆၄) နှစ်မြောက်တော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနာ...
သူတို့ မှဘဲ အသက်ရှိ...
REAL VIRUS (Conficker)
တရုတ်လဲ ချီးထုပ်ကို စိတ်ညစ်နေပြီ
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အယ်ဒီဆင်ကို နေ့တိုင်းဂုဏ်ပြု...
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သာသနာတော် ညှိုးနွမ်းပျက်စီးစေတဲ့...
တော်လှန်ရေး နေ့ အကြိုဗုံးပေါက် ကွဲမှုသည် ပြည်ပအဖွဲ ...
ဗမာပြည် အတွင်းမှ မတူညီသော လူနေမှုအဆင့်အတန်း
Tracking to former ABSDF chairman Tun Aung Kyaw
Earth Hour (မတ် ၂၉ ၂၀၀၉ ည ၈း ၃၀ မှ ၉း၃၀ အထိ)
မတန်မရာအသက် ၉၀ နေချင်ရသတဲ့ အဟိ
ပြည်ထောင်စုလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှ ထုတ်ဝေသော မတ်လထု...
အစိုးရမကောင်းလို့အလောင်းမလှ အရပ်ကောင်းမှ အလောင်း...
မတ် ၂၇ ၂၀၀၉ သတင်းများ
မယား ငယ်ချွဲချွဲရုံနဲ့ဒို့ တွေ မယုံ
ဗိုလ်ချူပ်ဖွဲ့ခဲ့တာ ပြည်သူတပ်မတော် နွားတွေလက်ထက်ကျ...
မီးမလာ ရေမလာ ဆိုးဆေး များတဲ့ မြန်မာ
မုဒိန်းတပ်မတော်ကို အညှီ ပျောက်အောင်လျှော်စေချင်တယ်...
လူတစ်ယောက် သုံးသိန်းဘဲ တန်လား
အကောင်းဆုံး မြေသြဇာ အဖွဲ့ရဲ့ မတ်လတော်လှန်ရေး..
ဆန္ဒတွေ ထုတ်ဖေါ်ကြစို့ 
ဗိုလ်မိုးကြိုး အပြန် နောက်ကြောင်း လှန်လိုက်သည့် ဗု...
အိုးဝေသံမြိုင်မြိုင် တဖန်ပြန်ကာနိူးထမဲ့ ဟစ်တိုင်
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်က တပ်မတော် ဦးဆောင်မှုကို မလိုလား...
(၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက စစ်အစိုးရ၏ အခြေခံဥပဒေ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အားလုံးလက်ခံနိုင်အောင် ကျင်းပဖို...
မြန်မာ ကောင်လေးကိုသိကြပါသလား..သိသူရှိရင် ဖော်ထုတ်ေ...
မြန်မာ သူခိုးတွေ သတ်တယ်တဲ့ဗျာ.( Yachtsman killed b...
ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ ( ကိုဗဟိန်း ရေးသည်)
UN Special Rapporteur on Human Rights in Burma (VO...
Global Campaign for Free Political Prisoners (VOA ...
မမေ့နိုင်တဲ့ မြန်မာ့အာဇာနည်များ..(ဆလိုင်း တင်မောင်...
အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင် ၁ နှစ်ပြည့် အလှူ
၂၀၀၉ မတ် ၂၄ , ၂၅ သတင်းများ
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆု...
Invitation Letter : Resistance Day of Burma - Wash...
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင...
ကြားရသမျှ မြန်မာအကြောင်း အကောင်းသိပ်မရှိ
မပျော်ကြပါနဲ့ မီးပေးဖို့မဟုတ်ပါ သန်းရွှေကို short ရ...
စစ်အာဏာရှင်များမှ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ထိုင်းအစိုးရမှ...
အိပ်ရာ ကမထ ကာလနာကျကောင်
Freedom from fear,Aun San Suu Kyi, Free Burma
Freedom Now DASSK
Statement of 88 Generation Students (Exile)
မတ် ၂၄ ၂၀၀၉ သတင်းများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဘီလ်ရစ်ချဒ်ဆန် စကားဝိုင်း...
နိုင်ငံရေးသမားကောင်း ဖြစ်မြောက်ရေး (ရေးသူ မောင်ဝံသ...
ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့ နွဲ့ နေသူ..
အာဏာရှင် ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ အတင်း အဓမ္မ တရားမ၀င...
ပညာဒါန ပါဗျို့ 
စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း လူသန်းပေါင်းများစွာ ထိခိုက်န...
မြန်မာ ဘယဆေးနှစ်မျိုး ခဲဆိပ်ပါ၊ ဖို့ဒ်ဝိန်းကျန်းမာ...
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်၏ တော်လှန်ရေးနေ့ သ၀ဏ်လွှာ
သန်းရွှေအမျိုးဆို sorry ဘဲ
Myanmar - After Nargis
Arrest Yourself for Aung San Suu Kyi in6Easy Ste...
ကေအင်န်ယူကို ၂ဖက်ညှပ်ပြီး ချကြရအောင်..တဲ။့သန်းေ...
Today Announcement from NLD
မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ် ၏ အလျှော်အစားဘွတ်ကီ ဒိုင်ကို ...
မြန်မာလူမျိုးတွေ နွံ့ နစ်နေပြီ။
နဂါးနီစာဖတ်အသင်း နဲ့ ဆရာလွန်း၏ စာများ
သံမဏ္ဍိ ကလောင်သွားနဲ့ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း (သ...
အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှု ဖက်ဆစ်တော်လှန်ေ...
တရုတ်ကို ပထွေးတော်ထားတဲ့ သန်းရွှေ
Images from Burma
မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မတ...
Voice of Burma March 22 2009
ချစ်သူများမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် သစ်ခွပန်းကလေ...
Hope for the KaRen / Burma Struggle
YouTube Campaign for Burma - Free Aung San Suu Kyi...
မြန်မာ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနူ (၁၉၀၇-၁၉၉၅)
သတိပေးစာ..သွေးမကွဲကြနဲ့ နအဖ ဆွဲသွားမယ်။.
မတ် ၂၀ ၂၀၀၉ သတင်းများ..
အာဇာနည်မျိုးမည်သည် ဤ သို့ ..စွန့်လွှတ်ရဲ စွန့် လွှတ်...
ပို့ပြီးသား Mail ပြန်ဖျက်ချင်လျှင် ရသည့် ထူးခြားသည...
ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများကို သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု အစ္စရေးစစ်တပ...
ကိုဇာဂနာ့ ကျန်းမာရေး မိသားစု စိုးရိမ်
မြန်မာပြည် မြို့ကြီး ၂မြို့တွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ နှု...
Summary Report on Military Engagements in KNLA Are...
“ကဲ ... ဒီတခါ မင်းတို့အလှည့် ...”
Aung San Suu Kyi is the unyielding hope of Burma
မြစ်ကြီးနားထောင်တွင်အကျဉ်းကျနေသော နိုင်ငံကျော် ဟာသ...
ကိုဇာဂနာ့ မိခင် ဒေါ်ကြည်ဦး ကွယ်လွန်
“အာဏာရူးများ မိုက်ရိုင်းချက် ကမ်းကုန်လာပြီ။ တွံတေ...
Statement of KNU on Hatgyi Dam Construction Projec...
ဦးပဉ္ဖင်းကျော်ဟိန်း လူဝတ်လဲဟု ကောလာဟလ ထွက်ပေါ်
နိူင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ..ကျမ်းမာရေးချို့ တဲ့
Bangladesh hardship better than Myanmar
ဒုက္ခသည်စခန်းများ ပိတ်ရန် ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့ တောင်းဆု...
ခိုကိုးရာမဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီးများကို ကာကွယ်ပေးကြပ...
ကိုဇာကနာ ခဲဆိပ်သင့်နေတယ်တဲ့ ဗျို့ 
ဒို့ ချစ်တာသူမ ။ ခေါင်းပြောင်ပုကွ ၀န်ကြီးချုပ်မဟုတ...
ညွန့် ပေါင်းသတင်း မတ် ၂၀၀၉
စစ်တွေ မှာ ခွေးတွေဆွဲနေတယ်
မြန်မာ့ Thugမတော်ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်မာမီကြီးများ
ကြေးစည်သံကြားရင် ခွေးလို အူ ပြီး -မျောက်လို ကနေ တဲ...
ကိုသက်နိုင်ဦး သုံးနှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေးအလှူ နေအိမ်...
မာဒါဂတ်စကာမှာ သမ္မတသစ်ကို ဖွဲ့စည်းပုံတရားရုံးက အတည်...
နအဖခေတ် မြန်မာနိုင်ငံမှ ခလေးငယ်များဘဝ
ပန်းပေးပြီးရင်တော့ လွမ်းရဖို့ သာပြင်တော့
သတင်းစာများမှပြောတဲ့ ၈၈၈၈ သွေးစွန်းတဲ့ မတ်လအကြောင်...
BURMA - Campaign to collect 888,888 signatures wor...
ငသန်းရွှေချစ်တပည့်ကြီး ၀န်ကြီးချုပ်အရေခြုံ ဗိုလ်ချု...
News bulletin _March Issue_2/No_5_2009
မြန်မာ ပိုက်ဆံ မှန်က ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာ ပါစေရမယ်
မတရားတာကို ချေမှုန်းကြစို့ 
Burmese in South Korea campaign for freedom of pol...
ရန်ကုန်မြို့တွင် East Point ကုန်တိုက်အသစ်ဖွင့်လှစ...
“လူမိုက်အားပေး”...“လှေနစ်ရာ ၀ါးကူထိုး“ မြန်မာပြည်...
ဘုရားပလင်တော်အတွက် အသုံးပြုရန် ဖြတ်တောက်ထားသည့် ကေ...
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူမရှိလို့ မြန်မာသံအမတ်...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြို အစုအဖွဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖိ...
မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့ NLD(LA)KOREA Branch ...
အမေ ပင်ပန်းနေမှာ ( Y မြစ်ချို)
သမိုင်းမှန် ကို ဂိုင်းမကန်စေချင်ပါ..
စက်မှု(၁)၀ံချီး ဦးအောင်သောင်း (ခ) ငအောင်သောင်း ခေ...
ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်က ဥပ္ပါတသန္တိရဲ့ သံပေါက်
ဘယ်သူပိတ်ဆို့တာမှ လက်မခံဘူး ...
“တိုင်းပြည်ကို မရ ရသလောက် ခွဲဝေစားကြတာပေါ့ဆိုတဲ့ သ...
သတင်းစာများက ပြောသော ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့် အမှု...
VDO Free Burma’s Political Prisoners Now!
ရံဖန်ရံခါ လေပြင်းများ တိုက်ခတ်မည့် သတိပေးချက်
အခုမှ ဘဲ ဒီရွာတွေ ပင်လယ်ရေပြင်ထက်နိမ့်တာ သိတော့ တာ...
မတ် ၁၄ ၂၀၀၉ သတင်းများ
တံတားဖြူ ဘာကြောင့် နီသွားရသလည်း
ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး အလိုရှိသည်။
သူလိုလူ ဇဗ္ဗူမှာ(ကနေ့ ခေတ် တပ်မတော်ထဲမှာ) ရှိသေးရဲ ...
ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်ရဲ့ ယုတ်မာသောလုပ်ရပ်
ဒုတိယကမ္ဘာ့စစ်လက်ကျန် ဗုံးပေါက်၍ မြောက်ဦးတွင် လူတဥ...
အဲ့ဒီနားက ရွားသားတွေရေ သတိသာထားပေတော့ ကိုယ့်ထ္မင်းက...
"အောင်ပွဲဆင်ဖို့ ထောင်ထဲဝင်စို့" ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲေ...
ကလင်တန်က ဒေါ်စုကို ‘မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်’ အဖြစ် ...
ဦးဂန္ဘီရက အင်တာနက်ကို တမ်းတ
စံပြကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့်ပြ...
ပို့ စကဒ် campaing နှင့် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲ nagoya(...
Voice of Burma March 15 2009
၂၁ မြောက်မြန်မာနိုင်ငံလူ့ အခွင့်အရေးနေ့ ပို့ စကဒ်
ဟံသာဝတီသတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင် မှ ဂျပန်ရောက်ဒီမို...
မြန်မာပြည်ကြီး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နေတဲ့ အချိန်မှာြ...
အလင်းအိမ် မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၃ အမှတ်၅
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ...
ရန်ကုန်မြို့တွင်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး အတွက် ဂျပန်ကူ...
သန်းတပ်တော် အင်အားရှိမှ ပြည်သူကိုနှိပ်ဆက်နိုင်မည်
သားတော်ကြီးတို့ အမိုက်အမဲကြီးတွေမို့ ခွင့်လွှတ်တော်...
လျှပ်စစ် ၀န်ထမ်းတို့ ထောက်လှမ်းရေးစတိုင် အရပ်ဝတ်ဖြ...
မြန်မာနိူင်ငံရေး အကျဉ်းသား သမဂ္ဂ၏ ထုတ်ပြန်ကျေညာချက်...
အသားမှာဝက်..အသီးမှာ သရက် အရွက်မှာလက်ဖက်ဆိုပေတဲ့ .....
Human Rights Day of Burma(BPPU statement)
မတ်လ ၁၃ ရက် သတင်းများ
ဘာလည်း ဟဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး
21 ANNIVERSARY OF BURMA’S HUMAN RIGHTS DAY.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့ အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း
March 12 and 13 Students Uprising in RIT
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဌ သူရဦးတင်ဦးန...
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲရက်ရန်ကုန်မှာ စစ်ကားတွေ ကင်းလှည့်
နေရေးထက် သေရေးခက်တဲ့ မြို့ မူဆယ်
Burmese Human Rights Day (aka. Phone Maw Day) invi...
anniversary of Ko Phone Mo death, Lobour Day in My...
ရေပါ ရင်လား ၀င်ခဲ့..FEC နဲ့ ဖြတ်စားဖို့အဆင်သင့်ဘ...
လက်ဖက်နှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူများ သိရှိရန် အသိပေ...
ခင်ဗျား ကျတော့ ကြော့လို့ 
ဒရက်ကူလာတွေ စိုးမိုးနေတဲ့နေရာက ဒရက်ကူလာငါးတဲ့..
မတ် ၁၁ ၂၀၀၉ သတင်းများ
၂၁ နှစ်မြောက် ဖုန်းမော်နေ့ သဘောထားကြေငြာချက်
မေတ္တာနန္ဒဓမ္မရိပ်သာ မဟာပဋ္ဌာန်းအောင်ပွဲနှင့် မေတ္တာနန္ဒေ...
ဘိုးဘွားပိုင်ဓါတ်ငွေ့ တွေ ရောင်းပြီးလမ်းခင်းတာ ကြံ...
ရန်ကုန်သားတွေ အဆင့်မြင့်နေတယ် ချိုးရေတောင် UV, OZO...
နအဖခေတ် မြန်မာနိုင်ငံဧ။် ပညာရေးစနစ် ဆိုးကြီး
ငကြင်းဆီနဲ့ငကြင်း ကြော်ချင်နေတဲ့ လူတွေ။
ဥရောပက အာဆမ်အစည်းအဝေးကို ခွေးမ၀င်ရတဲ့.... သွေးသံရဲ...
အာဏာပိုင်များ လာဘ်စားပြီး အကျဉ်းသားတဦးကို နာမည်ြေ...
တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြ ဦးအုန်းသန်း မိသားစုထောင်ဝင်စာ အတေ...
သောက်ကျိုးနည်း..သူတို့ လက်တွေ ချည်း..
AIDS တွေ ဘာကြောင့်ပွါးသလည်း မမေးနဲ့ 
မတ် ၁၀ ရက် ၂၀၀၉ သတင်း
တာချီလိတ်မြို့နယ်တွင် စိတ်ကြွဆေးပြား သန်းချီဖမ်းမ...
ဖုန်းမော်ကျဆုံးခြင်း အနှစ် (၂၁)ပြည့် ချီတက်ဆန္ဒပြပွ...
ကြားလို့ မှ မကောင်း လူမြင်ကွင်းကြီးမှာ
Hongkong Phoenix TV မှထုတ်လွှင့်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည...
တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူကို သွေးခွဲနေသူ မိစှ္ဆာတစ်ဦး
မတ်လ (၉)ရက် ၂၀၀၉ သတင်းများ
ကျောင်းသားတွေဖက်မှာ နေတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ သူရဦးတင်ဦ...
Thee Lay Thee Myanmar Yoeyar Ah Hla at New York
မေတ္တာနန္ဒဓမ္မရိပ်သာ ပဋ္ဌာန်အောင်ပွဲနှင့် မေတ္တာနန္ဒစေတီေ...
U TIN OO AND U WIN TIN BIRTH DAY2009 (2)
U TIN OO AND U WIN TIN BIRTH DAY2009
Birthday for U Win Tin & Thura U Tin Oo (Tokyo Jap...
စာမေးပွဲသပိတ်မှောက်မယ်ကြားတော့ ဖြေတဲ့သူ ကို အအောင်...
သေပြည်တော် ဘုရားတွင် ဆွမ်းဆန်စိမ်း ကပ်လှူပွဲကြီး ပြ...
ကားပျက်ချင်ရင်..မြို့ ထဲမှာပျက်မရဖူး..မြို့ ထဲမှာဆ...
အောင်သောင်းနဲ့ ပေါင်းပြီး အ၀ှါများသွားလို့ ...
မီးမလာ..ရေမရတဲ့ ဘ၀မှာ..ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့စာရေးရမတဲ့.....
မ၀ယ်မနေရ တဲ့ ( န . အ . ဖ ) တို့ပြော သော တိုး တက်...
ငသန်းရွှေ...ခင်ဗျား ဘာလုပ်မှာလဲ ?
Dubai မလာခင် သိစေချင်သည် (သို့) Dubai မှ မြန်မာ မ ...
NLD Women's Statement for International Women Day....
နအဖ ပညာရေးကို ဖျက်စီးတာ ရစရာမရှိတော့ဘူး
‘၁၉၅ဝ ခုနှစ်များမှ ခွပ်ဒေါင်းတို့ ၏ တွန်ကျူးသံ’
မတ် ၈ ရက် ၂၀၀၉ သတင်းများ
FBF သတင်းစဉ် vol2March 2009
Voice of Burma March 2009
Chronology for Feb 2009 by ABSDF
ခွေးခေတ်ခွေးအခါ ခွေးရူးကောင်းစားတမွန်းတက်ဘဲ လုပ်ထာ...
မီးမလာ၍ ဆယ်တန်း ပေါ့ ကတ် များအရောင်းသွက်
ရှေ့နေ အမှုလိုက်မိလို့ ထောင်ချတာ ကုလက ဒီတိုင်းကြည်...
(21) နှစ်မြောက် လူအခွင့်အရေးနေ့ 
“ရရင် ရ.....မရရင် ချ“ မော်လမြိုင်မှာ ကျောင်းသ...
လှိုင်မြို့ နယ် ရပ်ကွက် ( ၂ ) မီးလောင်
Mon Women’s Day Joint Statement
အကျဉ်းသားများကို မတရား ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် ရက်စက်စွာ...
UDP ၏ ဖြီးလုံးဖြန်းလုံးများ
လှောင်ချိုင့်ထဲက လူ ( ထက်အောင်ရှိုင်းမှ ဂုဏ်ပြုပါသ...
ကျက်သရေမဲ့တဲ့ အခွက်..မြန်မာတွေ အတွက် အရှက်
ပြည်သူတွေနေ့ စဉ်သုံး ငွေစက္ကူတောင် လုံလောက်အောင်မထု...
Do not fall asleep in the jungle
Monthly Chronology of Political Prisoner in Burma ...
Burma Herald report on UDP
စောက်သုံးမကြတဲ့ ခွေးသူတောင်းစားတွေကြောင့် နိုင်ငံန...
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲရှိ ကျွန်းနိုင်ငံလေးဖြစ်သော မော်ဒို...
ဒီကလေးတွေ အတွက် ကျနော်တို့လူကြီးတွေ မကူညီနိုင်ြ...
နေရာမရွေး..သူတို့လက်ချည်းဘဲ
သူတို့ ကျ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လား။
ကမ္ဘာလည်း..ကျော်လောက်ပေတဲ့ မြန်မာပြည်က ဒုက္ခသည်။
သာသနာဖျက်တွေရဲ့ သေပြည်တော်ကဘုရားထီးတင်ပွဲ အကြို အြ...
မိုး စုန်းစုန်းချုပ်နေတဲ့ ငါတို့ရဲ့ မနက်ဖြန်များစွ...
အာဇာနည်ရှေ့ နေ့ ကြီးများ ဘဘဦးအောင်သိန်းနှင့် ဦးခ...
မတ်လ ၅ ရက် ၂၀၀၉ သတင်း
ပရို ဘောလုံး ကလပ်တွေ ထောင်ပြီ
ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာ ( ၆၊၃၊၂၀၀၉)
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့် ကျင်ပါ။
စစ်အစိုးရက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနမှထုတ်...
တိုင်းမှုးမှ ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်သည့် တပ်သားများအား အ...
ဒီအရက်သမားကျတော့ ခွေူးသောက်နွားသောက် သောက်ခဲ့တာ အသ...
ဒေါ်စုကို ဂလပ်စဂိုမြို့ က အမြင့်ဆုံးဆု ပေးအပ်
သူ့ ချီး ကြွေးမယ်...
Enemies of Burmese Revolution
မြန်မာနိုင်ငံ လူအခွင့်အရေးနေ့(သို့ ) ကိုဘုန်းမော...
ဗုံးနှစ်လုံးပေါက်ကွဲမှု မိမိတို့လက်ချက်ဟု ပူးပေါင်း...
အိမ်ကျယ် အကြမ်းဖက်သမား လူယုတ်မာတွေအတွက် နိုင်ငံတကာ...
ဘယ်အခါမှ မြန်မာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးကောင်းသတင်းကြားရမှာလ...
ရန်ကုန်မြို့တွင်း တနာရီခန့်ခြားပြီး ဗုံးနှစ်လုံး ဆ...
ရရင်ရ...မရရင် ချ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင...
ကြက်သား တန်တယ်ဆိုပြီး ဝယ်မစားကြပါနဲ့အစားမတော်တစ်လု...
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ကလေးငယ်များအား ပြည်သူ့စစ်...
ဘူးသီးတောင် အကျဉ်းထောင်ထဲရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ...
မြန်မာမဟုတ်တဲ့ သန်ရွှေအကြောင်း ပေါ်ပြီ
အလုံ သစ်တောဝင်းအတွင်း မီးလောင်
မရှိမဖြစ်လိုနေုပြီ ဗ့ က့ သ...
တောင်သူလယ်သမားနေ့ တဲ့ ဗျ..
ဗုံးတဲ့ ဗျို့ 
သင်ဟာ........နိုင်ငံနဲ့ အမျိုး ရဲ့ အကျိုး တကယ်လိုလ...
ဘာကြောင့် နအဖ မိန်းမတွေကို ကြောက်ကြသလည်း
February 2009 issue of ALTSEAN Burma Bulletin.
ဥိးသန့်ရာပြည့်အမှတ်တရပွဲဖိတ်စာ
ကိုယ့်Blog post တွေအခိုးမခံရအောင်
ရွှေနိုင်ငံရဲ့သတင်း..
ကျပ်ပြေး နန်းတွင်းအရှုပ်တော်ပုံ အမှတ် ၂၁
မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၀၉ သတင်းများ
ဗိုလ်ရူးတွေ ကိုသတ်မဲ့ အဓမ္မ၀ါဒီ တွေ ကိုသတ်မဲ့ AAA တ...
မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အချိန်အခါကောင်းက...
တရားမ၀င် မြန်မာများအားလက်ခံထားသူများအား မလေး လ၀က အ...
လူပျက်များ ရဲ့ အစည်းအဝေး..
The Dark Side of Globalization Part (၁)
၀ံချီးချုပ် နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်
တယ်လည်း ကြောက်လှချေလား..ဘဘတို့ ရယ်...ဗန္ဓုလ သွေးတဲ့...
Union Of Human Right Council မှထုတ်ဝေသော Human Ri...
One year anniversary of ABMRC
FDB Statement for Dagon University students Feb 20...
ဧရာဝတီ၊ ယူဒီပီနှင့် လူလိမ်ဦးကျော်မြင့်